Soomaaliya oo laga saaray tartanka koobka bariga iyo bartamaha Afrika: Ogow sababtan yaabka leh - NorSom News
Xiriirka Kubadda Cagta bariga iyo bartamaha Africa ee CECAFA ayaa Soomaaliya ka saaray dalalka ka qeyb-galaya koobka Qaramada bariga iyo bartamaha Africa ee sanadkan ka dhacaya dalka Kenya. Tartankan ayaa socon doona 3-da ilaa 17ka Disembar ee sanadkan.
CECAFA ayaa sheegtay in Soomaaliya ay ka jirto xaalad dagaal, sidaas darteedna looga saaray tartanka sanadkan, iyadoo la ogyahay dagaalo ka ka xoog badan kuwii hore ineysan ka jirin dalka.
Dalalka Liibiya iyo Zimbabwe oo aan ka mid ahayn xiriirka CECAFA, ayaa lagu casuumay tartankan, waxaana labada dal hadda aaney wax badan ka fiicneyn Soomaaliya dhanka xasilloonida siyaasadda iyo dagaalada.
Xiriirka Kubadda cagta Soomaaliya oo waxa kaliya ee uu ku faani jiray ay aheyd inay ka qeyb-galaan tartamada caalamiga ah, guulaba yeysan ka soo hoynine ayaa hadda u muuqda inuu gabay kaalintii ka qeyb-galka ku koobneyd.
Masuuliyiinta xiriirka kubadda Cagta Soomaaliya ayaan illaa hadda ka hadlin warkan dhiilada leh, waxayna arintan ku soo aadeysaa xili bahda Isboortiga ay xiriirka ku eedeyaan inuu ku fashilmay horumarinta Isboortiga dalka.
Previous articleSiv Jensen oo iyadana markeeda ka hadashay caruurta Soomaaliya loo dhaqan celiyo.
Next articleDaawo: Dr Cabdulqaadir Khaliif: Astaamaha qofka noqon karo hogaamiye bulsho.
Kooxda Haugesund oo sheegtay ineysan heshiiska u dheereyn doonin Liibaan Cabdi.
Keydka NorSom Velg måned juli 2020 (5) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (78) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (62) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (40) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (110) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)